News - FedEx faobe fitifirana niharam-boina handray famatsiana ara-bola avy amin'ny fiaraha-monina tahirim-bola
Nahazo famatsiam-bola avy amin'ny kitapom-bolan'ny vondrom-piarahamonina ireo traboina fitifirana faobe FedEx
Indianapolis-enina herinandro izay no lasa hatramin'ny valo ny mpitifitra tao amin'ny maty ny olona ao amin'ny FedEx tany Indianapolis toerana ao.
Nandritra izany fotoana izany dia niray hina ny vondrom-piarahamonina mba hanohana ireo tra-boina, ireo tafavoaka velona sy ny fianakavian'izy ireo, ary nanangona vola mitentina 1,5 tapitrisa $.
"Rehefa mitranga ny tranga toy izany dia mahatsiaro ho tsy afa-manoatra ny olona ary te-hanampy," hoy i Jeffrey Dion, talen'ny fanatanterahana ny National Sympathy Foundation.
Ny National Sympathy Foundation dia manangona sy mizara fanomezana ho an'ny asa soa taorian'ny heloka bevava mahery vaika lehibe niseho.
Anisan'izany ny fianakavian'ilay niharam-boina, ireo naratra ary ireo olona nanatrika teo. Hisokatra mandritra ny herinandro maromaro ny vola.
Avy eo, ny vondrom-piarahamonina mitarika eo an-toerana dia hanao fivoriana ao amin'ny lapan'ny tanàna ho an'ny daholobe handrafetana fitsipika momba ny fitantanana ny vola.
Aasees Kaur, talen'ny Legal Client ary Community Services an'ny Sikh Union, dia nilaza hoe: "Tena mampihetsi-po tokoa ny mahafantatra fa mbola mijery ny filan'ny fianakaviana traboina indrindra ny olona."
"Fantatsika fa tsy niova ny tontolon'izy ireo, ary ho lava sy sarotra ny alahelon'izy ireo," hoy i Kaul.
"Makà fanampiana betsaka araka izay azo atao avy amin'ny vondrom-piarahamonina lehibe kokoa, ary arakaraka ny maha-tsara antsika," hoy i Kaul.
Copyright 2021 Nexstar Media Inc. Zo rehetra voatokana. Ity fitaovana ity dia mety tsy havoaka, havoaka, haverina soratana na zaraina indray.
Indianapolis-Tokony hahatsapa ho voaro ny tsirairay ao an-tranony. Ity ny fampahalalana izay nozarain'ny tompon'andraikitra IMPD sy ny talen'ny fahefana tompon'andraikitra ao amin'ny Indianapolis Housing Authority amin'ireo mpifanila vodirindrina aminy nandritra ny hetsika “Barbecue et Chill” voalohany.
Rehefa niverina tany amin'ny vondrom-piarahamonina Blackburn Terrace ny ankizy tamin'ny andro farany nianarana tamin'ity taona ity dia nifanena tamina piknika sy kilalao nomen'ny IMPD sy IHA izy ireo. Niverina tamin'ity hetsika ity ihany koa ny Niheim Hines's Indianapolis Colts.
Indianapolis - Raha mbola tsy nankany amin'ny Bankers Life Fieldhouse ianao tato ho ato, dia mety ho gaga ianao amin'ny manaraka any afovoan-tanàna.
Ny vanim-potoana fanorenana dia dàlana, sy ny tehaka ny mpankafy no nosoloina ny feon'ny milina ny mavesatra. Ny Pacers Sports Entertainment Group nilaza fa ho tonga ny "saha amin'ny ho avy", hanjaka ny lalana ho an'ny rehetra, fa tsy hoe baskety mpankafy, mba hankafy.
Indianapolis - Mangataka fanampiana amin'ny daholobe ny manampahefana mba hahitana vehivavy iray izay nandao ny tobim-pitsaboana Morgantown.
Guangzhou Ontime dia manome ny fandefasana iraisam-pirenena DHL / FedEx / UPS / TNT
Fotoana fandefasana: Jun-04-2021